လူတိုင်းမှာ အချစ်တစ်ခု အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်တဲ့ အခါ ဘယ်တော့မှ ခွဲမသွား ပါဘူး၊ ပစ်မထားခဲ့ပါဘူး၊ တသက်လုံး စောင့်ရှောက်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ နှုတ်ကတိလေးတွေ ထုံးစံအတိုင်း ပေးကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကတိစကား ပေးခဲ့တိုင်းသာ တည်မြဲရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကွာရှင်း ပြတ်ဆဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ […]
ဝင်းနဲ့ဇော် သေဒဏ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အလားအလာကောင်းများ ရှိ တယ် ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့် ပြောကြား Saturday, September 7, 2019 ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ရှိခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း)တွင် ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံသား (၂) ဦးဖြစ်သော […]
အွန်လိုင်းဆယ်လီအမလေး အဝတ်ဗလာနဲ့ LIVE လွှင့်ခဲ့လို့ ရဲဖမ်းခံရ…
အဝတ်ဗလာနဲ့ Live လွှင့်ခဲ့လို့ ရဲဖမ်းခံရတဲ့ အွန်လိုင်းဆယ်လီအမလေး ထိုင်း အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေမှာ Follower 150000 နဲ့ နာမည်ရနေတဲ့ ပွန်ပ လို့ အမည်ရတဲ့ ထိုင်းအွန်လိုင်း မင်းသမီးကို ညစ်ညမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှုကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ ပါတယ်။ သူမဟာ […]
ငါးအရိုးစူးလျှင်၁စက္ကန့်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသောနည်းငါး အရိုး စူး တာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးခဏ ခဏ မေးနေကြလို့ဒါလေးတင်ပေးလိုက်တာပါ… လက်တွေ့ ပျောက် ကင်း လို့ ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့လုပ်နေတာလေး မို့ ပါ ရှင်. ငါးအရိုးစူး လျှင် ကြက်ဥ အစိမ်း […]
“ဝိတ်တန်းမတူပေမယ့် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး. .ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး. .”ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း. .
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် နှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက် မစောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပါပြီတဲ့နော်. အာရှ ရဲ့ အကြီးမားဆုံး နဲ့ အခမ်းနားဆုံး ဖိုက်တာ ပြိုင်ပွဲကြီး ဖြစ်တဲ့ One Century ပွဲစဉ်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ […]
တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကြက်ဖကြီး အနိုင်ရ
တွန်သံဆူညံလွန်း​တာ​ကြောင့်​ နားညည်းပြီးအိပ်​​​ရေးပျက်​​စေတယ်​ ဆိုတဲ့အ​ကြောင်းပြချက်​နဲ့ အိမ်​နီးနားချင်း အငြိမ်းစားစုံတွဲရဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်းခံ​​​ခဲ့ရတဲ့ ပြင်​သစ်​ကြက်​ဖကြီး ​မောရစ်​ဟာ လူအများရဲ့​ထောက်​ခံအား​ပေးမှုနဲ့ အကာအကွယ်​​ပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး တရားရုံးမှာ အနိုင်ရတာကြောင့် ​မောရစ်​ရဲ့တွန်​သံကို ပြင်​သစ်​​ကျေးလက်​က Oleron ကျွန်း​ပေါ်မှာ ဆက်​လက်​ပြီးကြား​နေရ​တော့မှာ ဖြစ်​တယ်​လို့ BBC သတင်းရဲ့​ဖော်​ပြမှု​မှာ​တွေ့ခဲ့ရပါတယ်​။ Oleron ကျွန်း​ပေါ်မှာ အိမ်​ဝယ်​ပြီး အပန်း​ဖြေ​လာ​ရောက်​​နေထိုင်​​နေတဲ့ စုံတွဲဟာ […]
စားနေတဲ့ ပုစွန်တွေက ဧရာဝတီတိုင်းက လာတာလို့ အခုထိ ထင်နေသေးတုန်းလား…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ .. ငါးပုဇွန် အလွန်ပေါ ပါတယ် ..ရေခဲ ရိုက်ဖို့ ရေခဲ မဝယ်ချင်လို့ .. မပုတ်အောင် ဖော်မလင်သုံးတာက .. တစ်ပိုင်းပေါ့ ..အဲ .. ပြောချင်တာက .. ဒီပုဇွန် …ေ ဈးသယ်တွေက .. ချောင်းသာ ပုဇွန်လို့ လိမ်ရောင်းတယ် […]
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေအသည်းစွဲ တောရော မြို့ပါ မကျန် ဒီကြော်ငြာ သီချင်းသံတွေ ပျံ့လွင့်စေခဲ့သူကတော့ မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် သူမ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေဟာ ပရိသတ်ရင်ထဲ တသသစွဲစွဲကျန်ခဲ့လို့ ကြော်ငြာဘုရင်မရယ်လို့ တင်စားခေါ်ခံရသူဟာ ထက်ထက်မိုးဦးပါ ကြော်ငြာ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးရင်း အကယ်ဒမီဆုရှင် မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ […]
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ရေးသားတဲ့ နှုတ်ဆက် စာသဝန်လွှာ ဖတ်ရင်းက မျက်ရည်တောင် ဝဲမိပါတယ် ။ စာရဲ့ အစမှာ ရန်ကုန်မိုးဟာ စပါးနှံတွေကို စွတ်စိုစေရင်း အပူတွေကို လျော့ကျအေးမြစေရင်းကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ ရင်ကို ခဏတာ လွတ်လပ်မှု ရရှိစေပါတယ်။ လို့ အစပြုရင်း မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတာက […]
ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးဟာ ချစ်သူနဲ့လက်မထပ်ရသေးခင် အတူနေထိုင်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး ယခုဆို ကိုယ်ဝန်ငါးလရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း The Star သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ Setapak က ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖြစ်ချိန်ကတော့ စက်တင်ဘာလနှစ်ရက်နေ့၊ မနက် ၂ နာရီခွဲ တနင်္လာနေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်သုံးဦးဟာ […]